Homeकोरोना अपडेटफेरि बढे संक्रमित, नेपालमा आज कति संक्रमित थपिए ? हेर्नुहोस्…
September 10, 2020 admin कोरोना अपडेट 5938
नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा थप १ हजार २४६ ज’नामा कोरोना भाइरसको सं’क्रमण पुष्टि भएको छ । यो सँगै कोरोना संक्रमितको संख्या ५० हजार ४६५ पुगेको छ । स्वास्थ्य तथा ज’नसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले विहीबा’र नियमित ला’इभ अपडेटमा उक्त जानकारी दिएका हुन् ।
पछिल्लो २४ घण्टामा थप १ हजार ८१८ जना कोरोना संक्र’मणमुक्त
पछिल्लो २४ घण्टामा थप १ हजार ८१८ जना कोरोना संक्र’मणमुक्त भएका छन् । योसँगै नेपाल’मा कोरोना संक्रम’ण भएर निको हुनेको संख्या हाल’सम्म ३५ हजार ७०० पुगेको छ ।
उनीहरू देश’का विभिन्न स्थानका अस्पता’लबाट संक्र’मणमुक्त भएको स्वास्थ्य तथा ज’नसंख्या मन्त्रालयले जान’कारी दिएको हो। यसअघि बुधबार तथ्यांकअनुसार नेपालमा कोरोना संक्रम’णमुक्त हुनेको संख्या ३३ हजार ८८२ थियो ।
मन्त्रालयका अनुसार बुध’बारसम्म कोरोना’का कारण ज्या न गुमा’उनेको संख्या ३१२ पुगेको थियो । पछिल्लो २४ घण्टामा थप ५ जनाको कोरोनाले मृ त्यु भएसँगै ज्या’न गुमा’उनेको संख्या ३१७ पुगेको छ । – खबर हब
August 26, 2020 admin कोरोना अपडेट 6967
September 1, 2020 admin कोरोना अपडेट 5882
May 20, 2021 admin कोरोना अपडेट 4556